MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EYGA BELGIAN MALINOIS - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada eyga Belgian Malinois
7 bil jir Belgian Malinois
Liistada eeyaha Belgian Malinois Eeyaha Noocyada
Adhijirka reer Belguim Malinois
Eyga Shepherd Dog
Malium-ka Belgian wuxuu leeyahay jir inta badan lagu tilmaamo inuu yahay laba jibbaaran, maadaama taasi ay tahay qaabka ay u muuqato inay leedahay marka lugaha iyo khadadka kore laga eego dhinaca. Laabta ayaa qoto dheer. Khadka sare waa heer, oo waxoogaa u janjeera dhinaca engegga. Cabirka guud ee madaxu waa mid u dhigma jirka. Qalfoofku waa fidsan yahay iyadoo ballaciisu iyo dhererkiisuba isla masaafada yahay. Afka waxoogaa yar ayaa lagu muujiyey oo le'eg yahay dhererka dhakada oo leh joogsi dhexdhexaad ah. Sanku waa madow yahay sidoo kale bushimaha dhagan. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Indhaha dhexdhexaadka ah, yicibta u eg waxay u eg yihiin bunni. Dhegaha kacsan waa qaab saddex geesood ah. Dabada ayaa ku xoog badan salka iyada oo lafuhu gaarayaan hock-ka. Cagaha ayaa qaab bisad u eg. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Cimilada u adkaysta, laba-jaakad waa gaaban oo toosan. Midabka jaakadu waxay ku timaadaa fawn hodan ah ilaa cas ilaa mahogany ilaa madow, oo leh timo madow timaha. Maaskarada iyo dhegaha ayaa madow. Jirka hoostiisa, dabo iyo gadaasha dambe waa cows khafiifa. Timaha qoorta u dhow waxay u egyihiin qoorta, maadaama ay wax yar ka dheer tahay.
Malinois Belgian-ka waa mid ka mid ah afar adhi oo reer Belguim ah. Ey aad u dhalaalaya oo adeeca, waa la go'aamiyaa oo waa la ilaaliyaa iyadoo leh ilaalin xoog leh iyo dareen dhuleed. Bulsho sifiican si looga hortago inay noqoto mid xishood badan ama xasaasi ah. Belgian-ka Belinois wuxuu ubaahan yahay sayid khibrad leh oo adag, laakiin aan gacan culus lahayn. Haddii aad qallafsan tahay ama xad dhaaf tahay waxay noqoneysaa mid aan lala shaqeyn karin. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay muujiyaan kalsooni, maamulka dabiiciga ah eyga dushiisa. Shuruucda iswaafaqsan waa in la dejiyaa oo la caddeeyaa. Noocani waa mid si dabiici ah u ilaalinaya sidaa darteed waa in si wanaagsan loo tababaro oo la dhexgalo bulshada laga bilaabo da'da hore. Eydu waa inay dhexgalaan bulshada laga bilaabo dhalashada. Kufiican shaqada iyo adeecida tartanka, eeyahaani waxay sameyaan boliis heer sare ah iyo eeyaha ilaaliya . Shaqada noocan ahi hadda waa shaqadooda ugu weyn. Si kastaba ha noqotee, waxay sameeyaan xayawaan aad u fiican haddii ay leeyihiin milkiileyaal caqabad ku noqon kara maskaxdooda hawo hoggaamineed. Weligood waa feejignaan, feejignaan iyo daacad. Malinois Belgian-ku waa ku wanaagsan yahay carruurta haddii ay si wanaagsan ula wadaagaan iyaga. Noocani wuxuu u baahan yahay inuu ka mid noqdo qoyska oo aan lagu xirin aqal. Waxay u baahan yihiin hoggaamin, jimicsi maalinle ah oo ay weheliso tababar iyo wehel, waayo la'aanteed waa laga yaabaa inay noqdaan noqo mid wax dumiya oo ay adag tahay in la maareeyo. Malium Belgian-ku waa tamar sare, oo leh awood maskaxeed oo sareeysa, waana mid dhaqso u fahma. Waxay u baahan tahay shaqo in la qabto, gaar ahaan haddii aad la macaamilayso khadadka shaqada. Ka taxaddar marka aad soo bandhigayso eeygan xayawaanka yaryar ee aan xayawaanka ahayn . Waxay noqon kartaa mid ku xoog badan eeyaha kale waxayna u baahan tahay milkiile la xiriiri kara eeyga in xukunku yahay dabeecad aan loo baahnayn. Haddii ay si sax ah ugu dhexjirto bisadaha iyo xayawaannada kale, waa inaysan soo bandhigin wax dhibaato ah. Malium Belgian-ka ayaa laga yaabaa inuu si dabiici ah u soo bandhigo dhaqashada xoolaha sida cayrsashada iyo wareegga, dhaqaaq la’aanta saacado badan iyo ka-cararidda cidhibta dadka. Waa in la baraa inaysan dadka sidan ku sameyn. Tani waa eey aad u baahan. Waxay ubaahantahay milkiil khibrad leh waayo way sahlanaan kartaa in la xakameeyo ilaa milkiiluhu uusan garaneyn sida loola macaamilo mooyee. Qaabka mulkiiluhu u maareeyo eeyga wuxuu soo saari karaa kala duwanaansho ballaaran oo ku saabsan dabeecadda iyo gardaro . La hadal qof khibrad u leh nooca ka hor intaadan iibsan eeygaaga. Eeyadan badanaa wax cajaa'ib leh kuma dhisaan iibsashadaada kaliya diiwaannada waxqabadka iyo muuqaalka. Kaliya aqbal eeyga noocan ah haddii aad si buuxda u fahanto waxa loola jeedo inuu yahay alfa .
Dhererka: Ragga 24 - 26 inji (61 - 66 cm) Dumarka 22 - 24 inji (56 - 61 cm)
Miisaanka: 55 - 65 rodol (24 - 29 kg)
Noocan adag ee caafimaadka leh ma laha welwel caafimaad oo weyn. Qaar ka mid ah walaacyada yar-yar ee la arkay waa xasaasiyadda maqaarka, dhibaatooyinka indhaha, xishood xad dhaafka ah, gardarrada xad-dhaafka ah iyo mararka qaarkood sinta dysplasia iyo xusulka dysplasia.
Malinois Belgian-ka ayaa ku fiicnaan doona guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid dhex dhexaad firfircoon ka shaqeeya oo waxa ugu fiican ku samayn doonta ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Noocani wuxuu doorbidaa cimilo qabow, laakiin wuxuu si fiican ula qabsadaa kuwa kale. Waxay ku noolaan kartaa banaanka laakiin waxay doorbidi laheyd inay la jirto dadkiisa.
Kani waa eey shaqeeya oo caadeystay nolol banaanka firfircoon. Sidan oo kale waxay u baahan tahay jimicsi fara badan, oo ay ku jiraan a socod dheer oo maalinle ah . Intaas waxaa sii dheer, waxay si weyn uga faa'iideysan doontaa ka maqnaanshaha xarigga inta ugu macquulsan ee aag aamin ah.
Qiyaastii 12-14 sano
Iskucelcelis 6 - 10 eyyo
qaska loo yaqaan 'pitbull terrier mix with american bulldog'
Jaakadda jilicsan ee gaaban ee Malinois waa fududahay in la xafido. Si joogto ah ugu caday burush adag oo maydh oo kaliya haddii ay lagama maarmaan tahay, maadaama maydhashadu ay ka baxeyso ka hortagga biyaha ee jaakadda. Noocani waa iftiin joogto ah, laakiin si xoog leh ayuu u daadiyaa sanadkii laba jeer.
Malium-ka Belgian-ka waxaa loogu magac daray magaalada Malines ee Beljamka. Inkasta oo Biljamka Malinois wali dhif ku yahay USA, hadana caan ayuu ku yahay Beljamka, wadankiisa asal ahaan. Waa mid ka mid ah afarta nooc ee adhiga Beljamka, Belgian Malinois, Beljamka Tervuren , Biljamka Groenendael , iyo kan ugu caansan Belgian Laekenois , oo dhammaantood wadaaga aasaas guud. Wadamada badankood iyo naadiyada taranka dhammaan afarta eeyo waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin nooc isku mid ah oo leh noocyo kala duwan oo noocyada jaakad ah. Dhammaan afarta ey waxay wadaagaan halbeeg nooc ah dhammaan waddammada marka laga reebo AKC, oo tan iyo 1959 u aqoonsan yahay inay yihiin noocyo gaar ah oo aan aqoonsanayn mid ka mid ah afarta (kan Laekenois ), halka UKC, oo sidoo kale ah diiwaangelinta Mareykanka ay u aqoonsan tahay afarta noocba inay yihiin hal nooc. Noocyo badan oo caqli badan, dhammaan afarta nooc ee adhiga Beljamka waxay ku fiican yihiin hibooyin kala duwan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, shaqada bilayska sida, mukhaadaraadka iyo ogaanshaha bam, ilaalinta iyo Schutzhund, raadinta iyo samatabbixinta, sidoo kale addeecidda, deg degga, raadinta, dhaqashada, barafleyda iyo jiidista gawaarida iyo hagaha indhoolayaasha iyo kaaliyaha naafada. Awooddan sare, eeyaha aadka u caqliga badan waxay u baahan yihiin hoggaan, si loola dagaallamo, oo maalin kasta si fiican loo jimicsado sidaa darteedna aysan u ahayn qof walba, laakiin waxay la yeelan karaan saaxiib wanaagsan oo qoys leh milkiilayaasha saxda ah. Malium Belgian wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee afarta ido ah ee aasaasa nooc. Ilaa afarta kale qaab ahaan loo aasaasay waxaa loogu yeeri jiray 'Berger Belge a poil court autre que Malinois,' oo macnaheedu yahay 'Sheepdog-ga Beljim oo gaaban oo aan ahayn Malinois.' Maanta dhammaan afarta ido ayaa caan ku ah Belgium, iyadoo Laekenois iyo Malinois inta badan loo isticmaalo eeyo nooca shaqeeya ah, marka loo eego kuwa reer Beljam Groenendael iyo Tervuren laakiin dhammaan noocyada wali waxay sameynayaan shaqaale heer sare ah.
Dante, oo ah hal sano jir reer Belgium ah oo lagu magacaabo Malinios oo culeyskiisu yahay 75 rodol (34 kg) ayaa lagu socodsiiyay Belgium.
'Adonis waa Sheeko qurux badan oo reer Belgium ah. Wuxuu wehel layaableh u ahaa aniga iyo ninkayga, iyo waliba hada gabadheena yar ee 2 jirka ah. Waxaan sameeyay aqrin badan kahor inta aanan uqaadanin sida eey (at 6 todobaad), si aan ugu diyaar garoobo korinta a Adhijirka Jarmalka - uguyaraan taasi waxay ahayd qorshihii ilaa aan ka helay Adonis. Waxaan ku shaqeeyaa awooda faragelinta dabeecadda, waxaana aad ugu diyaar garoobay inaan noqdo mid is haysta oo aan wax ku baro a gacan adag laakiin naxariis badan . Adonis wuxuu ahaa arday aad u dag dag badan, laakiin eey aad u walaacsan. Wuxuu jeclaa inuu i farxad geliyo wax ka badan shaqada cuntada. Ka gudubka cabsidiisa ku dhowaad wax kasta oo cusub waxay ahayd caqabad joogto ah, laakiin waxaan ka gudubnay baqdin kasta oo cusub oo leh hagitaan adag oo joogto ah. Waxaan tagnay iskuul adeecid, laakiin waxaan u helnay mid aad ufiican oo labadeenaba naga gaabiya. Waan joojinay, laakiin shaqada ayaan ka sii wadan jirnay guriga. Adonis wuxuu leeyahay is-xakameyn weyn iyo ‘tabaha’ uu ku maaweeliyo dadka waaweyn iyo carruurta si isku mid ah. Adonis wuxuu ku fiican yahay xayawaanka kale illaa iyo inta si habboon loo baray. Waa mid xamaasad badan, hadal badan, oo ilaaliya. Isagu waa eeyaha ilaaliyaha cajiibka ah , waana feejignaan badan marka ninkayga (Alpha) uusan guriga joogin. In kasta oo aan tababaray Adonis, haddana wuxuu si fiican ugu dhaqmaa ninkayga markuu socdo . Wuxuu jecel yahay socod dheer, waa laga sii deyn karaa xadhiga oo wali wuxuu ku hoos jiraa xakameynta codka weyn. Waxaan isticmaalnaa isku-dar ah codka iyo amarrada gacanta. Adonis wuxuu ku fiican yahay ciyaar-dhuumashada, qabashada iyo cayrsashada kubbadaha, iyo dabaasha. Adonis waa eeyga aan waligayba jeclaan jiray ilmo ahaan, laakiin waan kari waayey. Lahaanshaha eey sidii qof weyn ayaa ka abaalmarin badan intii aan malayn lahaa. Ogaanshaha sida loo baro eeygaaga oo aad u noqoto hogaamiye xirmo wax ku ool ah runti wuxuu kobciyaa xiriirka K9 - aadanaha. '
4 bil jir heeler buluug
Loba ee reer Belgium Malinios eey ah oo 4 bilood jir ah— Iyadu waa eey firfircoon, caqli badan, qurux badan.
Kani waa Katie, waa 5 jir Belgian Malinois. Waxay ahayd lamaanaha milkiilaheeda 2 sano oo ka tirsan Ilaalada Xeebaha Mareykanka. Hadda waa howlgab oo waxay ku nooshahay nolosha gadaal ee milkiilaha milkiilaha guriga.
Clara the Belgian Malinois waa eey qurux badan oo ay soo badbaadiyeen bulshada deegaanka ee Humane. Waxay jeceshahay dadka, iyadoo la ciyaareysa eeyaha kale iyo bisadaha.
Tito madowgii reer Belguim ee Malinois oo jira 6 bilood
Tito madowgii reer Belgian Malinois markuu 6 bilood jiray wuxuu isku caawinayaa inuu wax cabo
'Nova, Lady iyo Willow dhammaantood waa wada qashin. Koodhkoodu ma awoodin inuu daryeelo, sidaa darteed weligood aadanuhu ma taaban ilaa ay 5 bilood gaaraan. Muuqaalka, waxay yihiin 7 bilood jir waxayna iila yimaadeen inay bartaan sida loo noqdo eeyaha bulshada, ee maahan eeyaha qolyaha. '
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Malium Belgian
Sawirada Belgian Malinois
Feedhyahan olde english bulldog mix
Maraykan Jack Pit Staffordshire Russell isku darka
apso lhasa iyo isku dhafka pomeranian
sawirada eeyo yaryar oo cadaan iyo cadaan ah
shukulaatada shukulaatada isku darka spaniel
waa maxay eyga dabagaalka ugu fiican